पूर्ण गर्मी 2013 को लागि साराफन
स्टाइलिश ग्रीष्मकालीन सन्ड्रेसहरू - गर्मीको मौसममा पूर्णतया अपरिहार्य कपडाहरू। आउनुहोस् कुन मोडेलहरू चयन गर्न सकिन्छ, त्यसोभए तिनीहरूले सफलतापूर्वक अङ्कको सबै कमजोरीहरूलाई लुकाउँछन्, र सबै भन्दा राम्रो यो सबै घटेर र आकर्षणहरूलाई जोड दिन्छ।
भित्री गर्मीको सर्फफनको लागि
पूर्ण वर्ष 2013 को लागि सराफन विभिन्न मोडेल र दृश्य प्रभावहरु संग मोडेल हुन्। तपाईंले ध्यान दिनु पर्छ पहिलो कुरा संगठनको लम्बाई हो। यदि ड्रेस लामो छ भने, फर्शमा, त्यसपछि यसले दृश्यात्मक रुपमा चित्रलाई आकर्षित गर्दछ, यो आंकडा अधिक पतला बनाउनेछ। समान प्रभाव बटन वा zippers को ठाडो पङ्क्ति संग प्राप्त गर्न सकिन्छ। यदि तपाईं सुन्दर घुँडाहरू जोड्न चाहानुहुन्छ भने, त्यसपछि यो घुटने-लम्बाई आउटटिट उठाउन लायक छ, तर एकै समयमा ध्यान छातीमा बदलिन्छ। त्यसकारण, पतली पट्टाहरू, एक ऊर्ध्वाधर कमर, गहिरो गर्दनको साथ घुँडामा सरफन उठाउँनुहोस्।
उठाउनुहोस् र धेरै तंग फिटिंग उपाधि नगर्नुहोस्। तर बेकार हूड्स पनि उच्च सम्मान मा छैन। केवल फिट शैलीको सरफान उठाएर कोसिस गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, तर "दहीमा" होइन। यस प्रकार, सम्पूर्ण कार्य "सुनहरा अर्थ" को एक प्रकार को खोज मा कम हुन्छ।
2013 मा पूर्ण को लागि फैशन र मोडेल को सैंड्रेस
2013 मा पूर्णतया ग्रीष्मका सर्फफनहरू हल्का प्रवाह रेशम वा शिफन हुन् जुन पूर्णरुपमा कमजोरीहरू लुकाउन सकिन्छ, साथै सहज र सुखद कपास र सिन। मुख्य कुरा अँध्यारो रङमा हट्नु हुँदैन। तिनीहरू केवल थोरै मात्र होइनन्, तर तिनीहरू एकदमै राम्ररि गर्दै छन्। सर्वोच्च मोनोफनिक सर्फफनहरू देख्नेछन्: क्रीम, गुलाबी, नीलो, इन्डिगो, इरोजो, पहेंलो। अत्यन्तै रोचक एक बहुमुखी कमर संग दुई-रंगको संगठन हो। उदाहरणका लागि, क्रीम र कालो, खैरो र गुलाबी, हल्का हरियो र पन्नाको संयोजन।
पूर्ण गर्मी 2013 को लागि सundress चयन गर्दा, दृश्य प्रभावहरूको साथमा मोडेलहरूमा ध्यान दिनुहोस्। यो हल्का सज्जित पोशाक हुन सक्छ, तर कालो पक्षका साथ - कालो वा गहिरो नीलो। यदि सोन्ड्रेस फ्लोरमा छ भने, तल्लो बिरुवाको मोडेल प्रायः रोचक देखिन्छ: एक अँध्यारो आधार र फ्लोरमा हल्का ऊर्ध्वाधर पट्टीहरू अगाडि। एक उज्ज्वल बेल्ट र टोनमा क्लचले तपाईंको तस्वीर पूरै पूरै पूरै गर्नेछ।
निस्सन्देह, कपडामा छाप नदिनुहोस्। तर यहाँ यो सम्भव छ सावधान रहनु आवश्यक छ। सराफानमा छाप फ्लोरमा ठूलो हुनुपर्छ। यदि तपाइँ छोटो मोडेलहरू मनपर्छ भने, यो एकमात्र छ जहाँ प्रिन्ट स्कर्टमा मात्र छ, वा पनीरमा छान्नुहोस्, र बाँकी मोनोक्रोम हुनुपर्छ।
एउटा संगठन छनौट गर्नुहोस् ताकि यसले तपाईंका कमजोरीहरू यथासंभव छान्नेछ, र सबै फाइदाहरूलाई जोड दिन्छ - र तपाईं अपरिहार्य हुनेछ।
फैशनेबल रिंग्स 2015
वसन्त मेकअप संग्रह 2014
चिफन ब्लाउज शैलिस 2014
कपडे - 2014 का रुझान
फैशनेबल शरद ऋतु शरद ऋतु
फैशन प्रवृति 2015
च्यानल - पतन 2016 - प्रसाधन सामाग्री
मैनीक्योर पतन-शीतकालीन 2014-2015
बैलेट के जूते 2015 मोडेल वर्ष
फैशनेबल महिला जैकेट 2016
फैशनेबल विवाह रिंग्स 2016
Drape कोट 2015
तितलीहरु संग मैनीक्योर - असामान्य डिजाइन को लागि उत्तम विचार
कसरी स्वच्छताको लागि हेरचाह गर्ने - सरल नियमहरू फूलमा घरको लागि
नाखूनको डिजाइन 2016
मानसिक सपनाहरू - अभ्यास
वास्तविक प्रेमीहरू के जस्तो देखिन्छ?
किनारमा कति कैलोरीहरू छन्?
एचसीजी को व्याख्या - व्याख्या
शरद ऋतु संग्रह जूता 2013
गर्भावस्थाको समयमा खाँसीबाट शहदसँग मिठो
एनिमिया - गम्भीरता
फैशनेबल जूता 2016
Nelly Furtado गोपनीय रूपमा आफ्नो पति संग भत्काइयो
कसरी एक किशोरीको वजन गुमाउनु?
पेन्सोलोक्सको पर्खालका लागि इन्सुलेशन
के यो बियर पिउन हानिकारक छ?
एउटा अपार्टमेन्टको लागि वालपेपर
घरमा स्लिमिङको लागि बाथ - 11 प्रभावकारी व्यञ्जनहरू
गाजर - रोपण र खुला मैदानमा हेरचाह गर्नुहोस्
सेन्ट जॉन को बेनेडिक्टिन मठ
किंग चार्ल्स स्पेनील
गर्भवती समयमा उचाइ